Iprojekthi yeSayensi yeNzululwazi elula kunye neNandi
Kulula ukwenza iintyatyambo zakho ezinemibala, ngokukodwa imifanekiso kunye ne-daisies, kodwa kukho iinkcazo ezimbalwa ezikunceda ukuqinisekisa iziphumo ezinkulu. Nantsi indlela oyenza ngayo.
Izinto zeeNtambo zeeNtlu
Ientyatyambo ezitsha, ngokubhekiselele ezimhlophe - Musa ukusebenzisa iintyatyambo ezifuthiweyo kuba zisenako ukufumana amanzi kakuhle. Ukhetho olufanelekileyo luquka ii-daisies kunye neenkcukacha.
Ungasebenzisa enye imibala yeentyatyambo ngaphandle kwemhlophe.
Gcina nje engqondweni umbala wokugqibela weentyatyambo uya kuba ngumxube weentlobo zemibala kwientyatyambo kunye nedayi. Kwakhona, ezininzi iintyatyambo zeentyatyambo zizibonakaliso ze-pH , ngoko unokutshintsha umbala wezinye iintyatyambo ngokuzifaka emanzini kunye ne-baking soda ( isiseko ) okanye i juisi / iviniga (i- acids ebonakalayo ebuthakathaka ).
Yenza Iintyatyambo Zembala
Ukuqhawula iimpawu zeentyantyambo zakho ukuze zide zide.
Yenza isiqwenga esinqunyiweyo kwisiseko se-stem phantsi kwamanzi . Ukunqunyulwa kutyalwe ukwenzela ukuba isiqu asiyi kuhlala phantsi kwisitya. Isinqununu esinqatyisiweyo sinokuthintela intyatyambo ukuba ingangeni emanzini. Yenza unqunywe ngaphantsi kwamanzi ukukhusela ama-bubbles emoyeni ukususela kwiibhubhu ezincinci kwisiseko se-stem, okuya kuthintela amanzi / umbala ukuba ungadalwa.
Yongeza umbala wokutya kwiglasi. Ukhangele malunga nama-20-30 amaconsi okubala kokutya nganye indebe yesiqingatha yamanzi afudumele. Amanzi afudumele aya kuthathwa ngokulula ngaphezu kwamanzi abandayo.
Beka isantya samanzi seentyatyambo emanzini anemibala. Iipalali kufuneka zibe nemibala emva kweeyure ezimbalwa. Kungathabatha ixesha elide iiyure ezingama-24, nangona kunjalo, kuxhomekeke kwintyatyambo.
Unako ukubeka iintyatyambo ezinemibala emanzini okanye kwindawo yokulondolozwa kweentyatyambo , kodwa ziya kuqhubeka zisela amanzi, ziguqula umbala webala phezu kwexesha.
Unokuwunqumla umgca uphakathi kwaye ubeke icala ngalinye kwicala eyahlukileyo ukuze ufumane iintyatyambo ezinobumba. Ucinga ukuba uza kufumana ntoni xa ubeka isigxina sesitshixo kwidayi eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nesiqingatha kwidayi ephuzi? Ucinga ukuba kuya kwenzeka ntoni xa uthatha ientyatyambo ezinemibala kwaye ufake isitye saso kumbala wombala ohlukileyo?
Iinkqubo ezimbalwa ezahlukileyo zibandakanyeka ekutheni 'ukusela' okanye ukuphefumula . Njengoko amanzi aphuphuma kwiintyatyambo kunye namaqabunga, amandla anqwenelekayo phakathi kwamamolekyuli wamanzi athi ukudibanisa kudonsa amanzi amaninzi. Amanzi athatyathwa ngamabhabhu amancinci ( xylem ) aqhubela isityalo sesityalo. Nangona i-gravity ingafuna ukukhupha amanzi abuyele emhlabathini, amanzi azinamathele wona kunye nala ma-tubes. Isenzo esithatha i-capillary sigcina amanzi kwi-xylem ngendlela efanayo njengoko amanzi ehlala emanzini xa ucela amanzi ngawo, ngaphandle kokuba kuqhume umphunga kunye nokuphendulwa kwezinto ezinokwenziwa kwezinto ezinokwenziwa kwezinto ezinokwenyuka kwegazi.
I-Color Color Experiment Facts Fast
Izinto eziphathekayo : Ientyatyambo ezikhanyayo, umbala wokutya, amanzi
Iingcamango ezifaniswayo : Ukunyuka kwamanzi, ukuhambelana, i-xylem, isenzo se-capillary
Ixesha elifunekayo : Iiyure ezimbalwa ngosuku
I-Level Level : Umqali
Iingcamango zeProjekthi zeSayensi zeBakala ye-3
Indlela yokwenza i-Nitrogen Ice Cream yotywala
Indlela yokwenza iibhotile ezininzi ezingenakwenzeka
Iingoma eziphezulu zothando: Imibhangano
Ukuhlaziywa kweNcwadi: "Izwe leSkull yami" ngu-Antjie Krog
I-Ice Cream Soda okanye i-Float Works
Yenza Yakho Ukulungisa iiPaint Chips
Iimpawu kwiDraft and Painting
Iingcingo ezilishumi zeMagical to Have a Hand
Iimpawu zeeNgcaciso zeMatriki eziPhambili
Isivakalisi Isivakalisi seLenzi Yenza
Konke Ngokudweba Iipaseli
Ixesha elinoMgaqo-mali alisoloko lilingana nelithi 'Ngaba'
Inkcazo yoBumbiswano kunye noLuntu loLuntu